Semalt Expert Anotsanangura Google Analytics Features Zvose SEO Champ Unofanira Kuziva
Hapana mubvunzo kuti Google Analytics ndechimwe chezvinhu zvinokosha uye zvinokosha pakunzwisisa pakuratidza vateereri vako uye kuravira kwayo. Ichi chishanditi chinokubvumira kukura zvakadzama mumhando yezvinyorwa varadi vako vaida kuverenga, mapuratifomu avo vanowanikwa zvakanyanya, uye nzira inovatungamirira kutenga zvigadzirwa nemasevisi ako. Zvose mabhizimisi makuru uye maduku anoshandisa Google Analytics uye kushandisa zvinyorwa zvayo, kugadzirisa dhesi yemasayiti avo uye kuronga nzira dzakanakisisa dzekutengesa.
Makore maviri akapfuura, mazana emakambani anoshandiswa neGoogle Analytics sechikamu chekuunganidza kwavo deta uye magetsi ekudhinda mazano. Makambani ese mashoma anoshandisa web analytics tools , uye vazhinji vavo vanosarudza Google Analytics - development of mobile apps. Vakwikwidzana veGoogle Analytics ndivo Adobe, Webtrends, nevamwe vakawanda. Zvinogona kunge zvisingaiti kuti mumwe wavo ave nokubudirira zvakadai seGoogle Analytics.
Zvimwe zvezvikamu zvakanakisisa zveGoogle Analytics zvakakurukurwa pano na Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt ..
Kana zvasvika pakutsvaga kuti webhusaiti yako uye mapeji aro akasiyana sei, ndizvo zvingaita kuti iwe uzviite. Kunyanya, iwe unofanira kutarisa nhamba yevhesi rako rekuona, hutsika hwemotokari yako uye IP mazita evashandisi vako. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuvhara pamusoro pemashoko ekutaura uye kuronga matambudziko mumwe nomumwe. Edza nepaunogona napo kuronga mapeji nekudhura kwezinga, asi izvi zvisingagoni kuisa zvachose mapeji ako ewebhu kuti awane unhu hwakakwirira. Pane kudaro, iwe unofanirwa kuronga peji maonero uye edza kuderedza kutengesa kwaunoita kusvika pamwero mukuru. Izvi zvinongovapo chete kuGoogle Analytics uye zvinogona kukupa zvakawanda zvakakunakira.
Zvakachengeteka kutaura kuti dzose dzewebsite dzine bhisho yekutsvaga vashandisi kuderedza zvavari kutsvaga. Tsvakurudzo yekutsvaga inokurumidza kuongorora tsvakurudzo yakawanda, kuchengetedza nguva yakawanda yevashandisi vako. Ichi chinoitwa chikamu cheGoogle Analytics, uye iwe unogona kuwana bhara munzvimbo yeSite Search. Nechibvumirano ichi, unogona kuona kuti mhando ipi yezvigadzirwa nemashandi zvakakosha zvakanyanya kune vateereri vako uye kuti ungaita sei nzvimbo yako nyore nyore kufamba navo.
Lark Remarketing Lists
Zita rekunyatsotarisa rinokosha pakushambadzira zvinangwa. Vanokubvumira kuti uwane kune vakawanda vanogona kutenga vatengi uye uchinje vashanyi vako kukutengesa. Vanounganidza dhesi pamusoro pevashanyi vako, vachivakwezva kune iwe webhusaiti yako uye zvigadzirwa zvayo. Ichi chinhu chikuru chiripo muGoogle Analytics uye inzira inofadza yekuita vazhinji vevateereri vamunayo, pasina ruzivo rwekutsvaga mumagadziro ako ekutengesa uye kushambadzira kwemashoko evanhu. Kuti uchinje zvirongwa zvayo, unofanirwa kuenda kuChirongwa cheGoogle Analytics uye chengeta pa "Kudzokorora" pasi pehurukuro inonzi Imba. Kana waita kuti izvi zvigone, iwe unogona kuwedzera vateresi kubva pane zvaunoda. Iwe unogona kuwedzera zvakare kune ramangwana rako rekukoka zvikwata zveAdWords. Ichi ndicho chinhu chakanakisisa muGoogle Analytics, ichikupa zvibereko zvakanaka.